Kenya:Ma sii dayn doono 6 Ruux oo ka tirsan Al-Shabaab | Waayaha
You are here: Home 2013 September Kenya:Ma sii dayn doono 6 Ruux oo ka tirsan Al-Shabaab
Nairobi (WNT)—Dowladda Kenya ayaa sheegtay in ay gacan buuxdo ka geysan doonto sidii loo qaadi lahaa dagaal ka dhan ah ururka Al-shabaab oo dagaal xooggan ka wada gudaha Soomaaliya.
Wasiirka Arimaha gudaha iyo Amniga Qaranka ee Dowladda Kenya Josef Olelenku oo wareysi siinayay Wakaalada Reuters ayaa aad carabka ugu adkeeyey inay sii wadi doonaan Dagaalada ay kula juraan Al Shabaab,isagoo intaasi raaciyey in Kenya Ciidamadeeda ay qeyb ka yihiin Howlgallka AMISOM.
Mr Josef Olelenku oo hadalkiisa sii wata ayaa waxaa uu intaasi ku daray in ay ka hortagi doonaan Khataraha ka imaankara Al Shabaab oo dhawaan weerar ku qaaday Suuq lagu magacaabo Westagte Mall oo ku yaala Mgaalada Nairobi ee Dalka Kenya.
Dowladda Kenay ayaa sidoo kale ka hadlay in aysan sii deyn doonin 6 Ruux oo sida la sheegay ka tirsan Al Shabaab islamarkaana lalal xiriirinayo Kooxihii Weerarka Westgate Mall ka dambeeyay.
Wasiirka Arimaha gudaha iyo Amniga Qaranka ee Dowladda Kenya Josef Olelenku ayaa Hadalkiisa waxa uu imaanayaa xili dhawaan Dagaal yahano ka tirsan Al Shabaab ay weerar qasaaro Dhimasho iyo Dhaawac geystay ay ku qaadeen Xarun ganacsi oo ku taala Magaalada Nairobi ee Dalka Kenya.